Talo siinta buugga, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ku soo dhowow guriga
Muujintii Axdiga Cusubi oo ka yaabisay maanka iyo Hore taabtay.
Beddelka Axdiga Cusub, Fred Ritzhaupt wuxuu kuu soo dhowaanayaa Ilaahii Ciise u soo bandhigay inuu yahay "Abba, Aabe". Casuumadda Eebbe ee ah inuu galo xiriir shaqsiyeed la lahaado waxaa lagu muujiyey qoraalka.
Wareejintani waxay isku daraysaa nolosha cusub ee luuqada casriga maanta iyo daacadnimada qoraalka Griig ee asalka ah. Maqnaanshaha dhicin, wareejinta sharraxa iyo jumladda quruxda badan waxay ka dhigaan akhrisku mid raaxo leh.
Qof kasta oo soo ogaado xiriirka aabihiis inuu la yimid Ilaah, ugu dambeyntii "guriga". Waxaan rajeyneynaa iyo duco nooceeda ah in fidintaani tahay wehelkaaga guriga.
Ulku - waa usbuuc dhammaadka leh oo Ilaah la jira
waxaa qoray William P. Young
Gabadha yar ee Mackenzie ayaa la waayey sanado ka hor. Raadkoodii ugu dambeeyay ayaa laga helay guri ku yaal kaynta meel aan ka fogayn goobta qoysku degenaa. Afar sano kadib, dhexda murugada badan, Mackenzie waxaa casuumad macno leh ka heshay rugtan. Soo dirahaagu waa ilaahay. In kasta oo uu shaki ku jiro, Mackenzie wuu aqbalay casuumadda. Socdaal aan la garanayn ayaa bilaabmaya. Wixii uu halkaas ka helo ayaa beddeli doona dunida Mack weligeed.
Shisheeyuhu wuxuu u muuqdaa nin oday ah, borofisar cilmiga fiqi ah, gabar indha la ', wadaad kiniisad ah, wacdiye wacdiya barwaaqo iyo dhillo baadiye ah.Wuxuu noloshooda galaa, weydiiyaa su'aalo aan fiicnayn - wuxuuna isu muujiyaa sida Ciise. Dhex-dhexaadiyuhu waa khayaali fiqi ahaaneed, oo lagu xoojiyay dhacdooyin taariikhi ah, kaas oo u dhaqaajinaya qoraaga caanka ah ee Dostoevsky "The Grand Inquisitor" qarnigii 21-aad. Ciise wuxuu umuuqdaa mid qarsoon si uu u arko bal inuu iimaan ku helo dhulka. Kulamada qarsoon ee la isweydaarsanahay, maahan kaliya lix mudaharaad oo muhiim ah, laakiin sidoo kale su'aasha ayaa ah: Maxaan sameyn lahayn haddii Ciise muujiyo?
Waa inaan waalanahay inaan sidan oo kale u noolaado
"Beddelka Guusha Radical" wuxuu u horseedaa qoraaga buuggan geetooyinka oo ay weheliyaan dadka bilaa hoyga ah iyo Ciraaq inay u ololeeyaan nabadda. Sheeko jacaylku ka buuxo, hal-abuurnimo iyo aaminaad adduunka ku beddela ficillo jacayl oo ...
Sideed ugu nooshahay Masiixi ahaan? Shane Claiborne waxay ku hogaamineysaa su'aashan siyaabo aan caadi aheyn. Wuxuu u safraa Calcutta wuxuuna raacaa Hooyo Teresa oo ah kuwa ugu saboolsan masaakiinta - oo halkaasuu Ilaah kula kulmayaa qaab cusub. Isbadalkiisii ​​"isbedelka xagjirka ah" wuxuu burburiyey qorshihiisa xirfadeed, wuxuu u horseeday geetooyinka ku yaal bartamaha magaalada oo ay weheliyaan dadka la illoobay ee bulshada hodanka ah iyo kan Baqdaad bilowgii dagaalka Ciraaq 2003 isagoo u dhaqdhaqaaqa nabadda. "Xag-jiriinta samafalka ah" waxay sheegaysaa sheeko kaamil ah oo kalgacal leh, hal-abuurnimo iyo aaminaad adduunka ku beddela ficillo jacayl oo yar.
Jacaylka aan caqliga lahayn ee Ilaah
Bal qiyaas maalin duufaan ah oo badda dhexdeeda ah: markabkaaga waxaa lagu tuuraa hirarka gadaal iyo hirarka waxayna ujirtaa naxariis dabeecadda. Awoodda oo aan la magac-dirin oo laga baqo isla waqti. Brennan Manning, tani waa sawir ku habboon jacaylka Ilaah ee innaga aadanaha u qabo - jacayl xamaasad leh oo aan xad lahayn. Farriintan dhaqaajineysa, qoraaga caanka ah wuxuu marka hore ka hadlayaa dadka ku halgamaya culeyska diinta. Kuwaasoo dareensan inaysan waligood la kulmin baahiyada Eebbe. Buuggan yari wuxuu leeyahay awood uu ku beddelo aragtidaada Ilaah mar iyo dhammaan.
Jacaylku wuxuu leeyahay ereyga ugu dambeeya
Rob Bell wuxuu la yaaban yahay su'aasha da'da duugga ah ee jannada iyo cadaabta, xukunka iyo nimcada oo abuuraya geesinimo, sida ugu wanaagsan ee dareenka sawirka ah ee Ilaah, halkaas oo jacaylku leeyahay ereyga ugu dambeeya.
Masiixiyiin tiro badan oo weligoodba la qabsaday ayaa su’aal ka taagnaa sida iimaanku u dhihi karo dhinac: Eebbe waa jacayl, dhanka kale wuxuu xooga saarayaa suurtagalnimada in malaayiin dad ah ay waligood ka go’do Ilaah. Buuggan, Rob Bell wuxuu ku raad raacaa su'aalaha ka soo baxa xiisadan. Sidee buu Eebbe ugu qaadan karaa xorriyadda aadanaha si dhab ah, taas oo u baahan jacayl isla mar ahaantaana ku guuleysta hadafkiisa u gaarka ah ee ku guuleysiga dadka oo dhan jacaylkiisa? Oo sidee loo fahmi karaa shuruudaha Baybalka, badbaadinta, toobadkeenista, jannada iyo cadaabta? Buugani wuxuu muujinayaa aragtiyo aan caadi aheyn oo horseedi kara daahfurka: Warka wanaagsan wuxuu aad uga fiican yahay sidii aan horeyba ugu fikirnay.
Oohinta buuraha duurjoogta ah
Bill Th Guud ahaan, Bruce McNicol, John Lynch
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay meel ay dhab ka noqon karaan. Steven Kerner run ahaantii wuu sameeyay: shaqo aad u mushahar badan, xaas weyn, gabar si fiican uhadashay. Laakiin kadib markii mid ka mid ah waxyaabaha caadeysto ee xanaaq badan, xaaskiisa ay dibedda ka saarto albaabka. Steven waa inuu qirtaa in shaqadiisu aysan fulin, ma garanayo sida loo badbaadiyo guurkiisa, mana haysto qof uu la hadlo.
Si lama filaan ah halyeeyga Andy wuxuu u muuqdaa kuwa u muuqda inuu wax badan ka ogyahay Steven. Wuxuu geyn doonaa Café-ga - oo ah goob la aqbalo, cafis iyo nimco lagu xukumo. Halkaa, iyada oo "dhex jirta" guuldaraystay ", wadadii Steven ee dib loogu soo nooleeyay noloshiisu waxay bilaabataa - iyo Ilaaha jecel isaga oo aan shuruud lahayn.
Jacayl iyo ixtiraam
Haweeneydu waxay dooneysaa inay si shuruud la’aan ah ninkeeda u jeclaato. Ninku wuxuu doonayaa inuu si shuruud la’aan ku xushmeeyo xaaskiisa. Tani waa sirta ugu weyn ee guur guul leh. Mabaadi'da kitaabiga ah ee ku saleysan kitaabkan ayaa kaa caawin doonta inaad si wanaagsan ula fahamto lammaanahaaga isla markaana aad aragto baahiyaha qarsoon ee midba midka kale ka qabo. Tus xaaskaaga jacaylka nolol maalmeedka ay jeceshahay. Baro sida aad ninkaaga u tusto aqoonsiga iyo xushmadda taas oo muhiim u ah maalin kasta. Waxaad lammaanahaaga ku arki doontaa indho aad u kala duwan - oo aad shuraaknimadaadu ku yeelan doontaa si qoto dheer oo caan ah.
In aan ku noolaano nolol maalin kasta oo aan gabi ahaanba hubno in aan si shuruud la’aan ah Ilaah u jeclaaday - taasi runtii waa suurto gal, oo muxuu u eg yahay duruufaha la taaban karo? Wayne Jacobsen wuxuu ina siinayaa fahmid talaabo talaabo talaabo ah ee sida jacaylka qoto dheer ee Ilaah noogu qabo runtii iyo sida ay xaqiiqadan isaga u saameyso nolol maalmeedkeena. Muhiimadu waxay tahay inaan u nimid waxyi cad oo ku saabsan sababta uu Ciise noogu dhintay iskutallaabta dusheeda. Ciise wuxuu u oggolaaday dembiga iyo ceeb inuu jidhkiisa cuno si aan hadda ugu raaxeysano xiriirka aabihiis. Natiijo ahaan, waxaan ogaanay in aanan naloogu yeedhin addoomo, laakiin nahay wiilal iyo gabdho. Aabahan wuxuu inaga jecel yahay xoog iyo qoto dheer qofkasta oo dunida ah. Jacaylkiisa jacaylku wuu inala jiraa duruufaha oo dhan. Waxaan la leenahay xiriir nool oo isaga naga celiya xanuunka ceebta oo na beddelo si aan ugu noolaano sidii carruurtiisa oo kale.
Nimco saafi ah oo dheeraad ah
Buugani wuxuu u dhacayaa sidii saliida - maxaa yeelay Ryan Rufus wuxuu ku dhawaaqay farriin cad, oo caafimaad u leh nafaha Masiixiyiinta ah ee xanuunka daran. Caqiido ku saleysan fikradaha qaldan ayaa waxay horseedaa dhimashada ruuxiga ah. Taasi waa sababta Ryan Rufus uu si cad ugu barbar dhigayo dariiqa qaldan ee sharci ahaanta iyo is-xaqsiinta iyo dariiqa fudud, ee xoreynta nimcada Eebbe. Xitaa Masiixiyiinta xilliyada leh waxay ku subkadaan awood adag xagga cilmiga nimcada.
Publisher Grace Maanta, ISBN: 978-3-943597-14-1
Farriinta cad ee nimcada
Nimco waa farriinta ugufiican ee qofku weligiis ku maqli karo noloshiisa! Waxay awood u leedahay inay ku xoreyso, kuu beddesho, oo ay kugu qalabeyso nolosha. Nimco ma aha sida ay tahay inaad u qummanaato, laakiin sida aad ugu fiicnaateen Masiixa. Ogaanshaha qofka aad ku noqotay Masiixa had iyo goor waxay kuu horseedaa inaad ogaato wuxuu isagu samayn karo iyo wuxuu kugu samayn karo. Toddobada qaybood ee waxbarista xoogga leh ayaa kaa caawin doona inaad ugu gudbiso nimco dadka kale caddeyn iyo fududaan, adoo abuuraya farxad iyo xamaasad.
Injiilka toban eray
Adigoo adeegsanaaya toban eray, Paul Ellis wuxuu si cad u cadeynayaa in injiilka Ciise Masiix uusan aheyn war wanaagsan oo kaliya, laakiin uu yahay farxada, kacaanka, farriinta xoreynta ee la qiyaasi karo. Masiixa dhexdeeda waa nala jecel yahay, waa la heshiiyey, waan badbaadinay, waan la midaysan nahay, waa la aqbalay, qudduus, xaq buu ahaa, dembiga wuu dhintay, kan cusub iyo boqornimadiisa. Ma jirto meel dambe oo loogu talagalay sharci ahaanta iyo fikirka waxqabadka.
Publisher Grace Maanta, ISBN: 78-3-943597-53-0
Injiilka labaatan su'aalood
Wadada looga baxo sharciga iyo nimcada, badiyaa waxaan nahay su'aalo badan. Waxaan u baahanahay inaan baranno cidda iyo sida Ilaah run ahaantii yahay iyo waxa ay tahay shaqadii Ciise annaga noo tahay. Su'aalahayagu waa sida furayaasha furaya khasnadaha. Buugani wuxuu leeyahay jawaabo wuxuuna ina siinayaa furayaasha xiriir aamin ah oo ilaah lala yeesho.
Su'aalaha buuggan ku yaal waxay kuu geyn doonaan meelo cusub. Kuwaani waxay kaa dhigi doonaan inaad ku dhaansato meelaha sare ee raallinimadaada aabbahaa. Iskusoo wada duuboo, waxay horseed u leeyihiin xiriir qoto dheer oo lala yeesho Ciise, kaasoo ah jawaabta ugu weyn ee dhammaantood.
Publisher Grace Maanta, ISBN: 978-3-943597-48-6
Waxaan u maleyn jirnay in la bogsaday, laakiin inteena badan ayaa miyir la 'ku keentay nolol cusub, nolol aan noolayn. Buugani wuxuu ku ogaanayaa in dadka ay ku mashquulsan yihiin la tacaalida dhibaatooyinka dembigooda keligood. Tani waxay sumaysay bulshada waxayna qarin jirtay warkii wanaagsanaa ee asalka ahaa. Waxaan dejinay heer aannaan ku noolaan karin - sidaas darteed waxaan isu sheegnay inay tahay heerka Ilaahay. Qaarkeen baa naga nabad geliyay arintan oo waxay noqdeen kuwa nugul, laga shakiyo iyo kuwo aan dan ka laheyn.
Publisher Grace Maanta, ISBN: 978-3-95933-055-8
Ciise daahir. 100% dabiiciga ah. Waxyaabaha aan lagu daro
Iyada oo leh dhammaan ballaadhka aan loo baahnayn, dib ugu noqo farriinta farxadda leh, ee xoraynaysa ee Ciise Masiix qaabkiisii ​​asalka ahaa! Tani waa waxa Andrew Farley ku saabsan yahay, kaasoo si shaqsi ah u soo maray sida sharciga, cadaadiska diimeed iyo guusha cibaadada ay u horseedi karto rajo xumo iyo niyad jab - maxaa yeelay illaa iyo hadda wax walba oo soo kordha maaddaama Masiixiyiintu ku jirto ruuxa Masiixa. Buugga Farley waa mid nolosha beddelaya.
Publisher Grace Maanta, ISBN: 978-3-943597-15-8
Qoraha buugani wuxuu ina siinayaa safar safar oo xiiso leh iyada oo loo marayo sheekada Ilaahay dadka. Wuxuu sharraxayaa axdiyada Ilaah ee kaladuwan - oo uu la galay Ibraahim, xagga Muuse iyo ugu dambayntii axdigii hore, axdiga cusub ee Ciise Masiix. Waxay u leedahay dhammaanteed: Sababtoo ah Masiixa ayaa laynaga badbaadiyey mar keliya iyo dhammaanteen oo innaguna waxaynu nahay kuwo dhaxla Ilaah. Gaar ahaan aragtida guud waxay cadaatay inaynaan wax dambe ku dari karin. 'Buug adag oo muhiim ah. Waxay muujineysaa xorriyadda ku jirta nimcada Ilaah.
Publisher Grace Maanta, ISBN: 978-3-943597-20-2
Loogu tala galay sharci
Sirta guusha aan dadaal lahayn, dhammaystirka iyo nolosha guuleysata. Maxay dad badani u helayaan buuggan dabayl xoog badan? Waxaa laguugu yeedhay inaad la kulanto guul, dhammaystir iyo guul. Buugani wuxuu muujinayaa sida aad uga gudbi karto ugana maarayn kartid dhibaato kasta, baahi kasta iyo caado kasta oo wax dumisa oo jidka ku taagan. Maahan wax ku saabsan waxa ay tahay inaad sameyso, laakiin waxa adiga horay looguugu qabtay. Khasab kuguma aha inaad kaligaa sameyso maxaa yeelay adiga ayaa horey looguugu qabtay. Khasab kuguma aha inaad ku qasbto isbadalkaaga - waa xoogga iyo xoogga Ilaah ee kugu beddela. Maanta ka biloow inaad wajaho cudurka, dhibaatada dhaqaale, xiriirada jaban iyo caadooyinka burburka leh kalsooni iyo awood iyo inaad xukuntid iyaga! Joseph Prince waa aabe cajiib ah, ninkeeda iyo saaxiibkiis oo maamula mid ka mid ah kaniisadaha ugu waaweyn adduunka. Sida uu u nool yahay una maalgashado wuxuu ka dhigaa ereyadiisa mid la aamini karo oo lagu qanci karo markuu ka hadlayo guusha iyo nolosha buux-dhaafka ah ee Eebbe ballan qaaday.
Publisher Grace Maanta, ISBN: 978-3-943597-70-7